Zanu PF neMDC Alliance Zvonakurirana Nyoka Mhenyu Pakuputswa kweDzimba muHarare
Vanhu vachiona dzimba dzaputswa kuBudiriro dzichinzi dzakavakwa zvisiri pamutemo.
Pave nekunakurirana nyoka mhenyu pakati pehurumende yeZanu PF nebato rinopikisa reMDC Alliance, zvichitevera kuputswa kuri kuitwa dzimba nezvivakwa zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo muguta reHarare.
VeZanu PF pamwe nehurumendevari kupa kanzuru yeHarare, iyo inotungamirirwa neMDC Alliance, mhosva yekuputsa dzimba dzayakamborega dzichivakwa kusvika dzapera, izvo zvinonzi zviri kuita kuti vanhu varasikirwe nepekugara uye mari dzavakashandisa mukuvaka dzimba idzi.
Asi veMDC Alliance vari kuramba kuti kanzuru yeHarare ndiyo ine masimba ekuputsa dzimba, vachiti makanzuru haana masimba , asi kuti hurumende kuburikidza nebazi rezvekutongwa kwematunhu, gurukota redunhu reHarare pamwe nemukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvebudiriro mudunhu reHarare.
Nemusi weChitatu, munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance, VaSesil Zvidzai, vakaburitsa gwaro vachishoropodza bazi rezvekutongwa kwematunhu, gurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaJuly Moyo, gurukota redunhu reHarare VaOliver Chidawu pamwe nevari kufambiswa mabasa ebudiriro mudunhu iri, VaTafadzwa Muguti, vachiti ndivo vane chekuita nekuputswa uku.
VaZvidzai vakati kuputswa kwedzimba uku kwaita kuti mhuri dzakawanda dzisare dzisina pekugara pamwe nepfuma, uye kuti kuri kuitika munguva yekunaya kwemvura ino. Vanoti dambudziko riri kuvanhu vanoita zvekutenegsa nzvimbo dzekuvakira, avo vavanoti vanodzivirirwa neZanu PF.
Asi vachinyorawo padandemutande reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vati hurumende iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo hurongwa hwekuputswa kwedzimba muHarare chiri chisungo chakaitwa nekanzuru yeguta iri.
VaMangwana vatiwo kanzuru yeHarare yakatoenda kumatare edzimhosva ichida kuti ipiwe mvumo yekuenderera mberi nekuputsa dzimba dzairi kuti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo.
Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka remadzimai muMDC Alliance, Amai Barbara Tanyanyiwa, vanoti zviri pachena kuti MDC Alliance haineyi nechekuita pachiitiko ichi sezvo maoko emakanzura akasungwa nemitemo yekutongwa kwematunhu, iyo inopa masimba kugurukota kuti riite zvarinoda.
Amai Tanyanyiwa vanoti mhosva huru iri kubato reZanu PF, iro vanoti rinopa vanhu pekugara zviri kunze kwemutemo munguva yesarudzo senzira yekutsvaga mavhoti, yozovarasisa kana sarudzo dzapfuura.
Asi nhengo yeZanu PF, Doctor Simba Mavaza, vanoti vanhu vari kuti MDC Alliance haineyi nechekuita nekuputswa kwedzimba vanhu vasingazive mafambisirwo emakanzuru, vachiti hurumende haipindire, izvo zviri kuonekwa panenge pachiputswa dzimba kuti ndiani aripo, vashandi vekanzuru nemapurisa ekanzuru, kwete vehurumende.
Doctor Mavaza vanotiwo vechidiki veZanu PF vanyorera tsamba meya veguta reHarare, VaJacob mafume, vachivakurudzira kuti vamise kuputswa kwedzimba uku. Vanotiwo kanzuru yaudzwa kuti imise kuputswa kwedzimba uku yozivisa vanhu pachine nguva kuitira kuti vagadzirire, pamusoro pazvo yotsvaga nguva yakanaka yekuparadza sdzimba idzi, kwete nguva ino yekunaya.
Asi vamwe vave kuona chiitiko ichi sechave kushandiswa sechombo chezvematongerwo enyika mukurwira masimba pakati pebato riri kutonga reZanu PF nerinopikisa reMDC Alliance mukutungamira guta reHarare.
Hurukuro naDoctor Simba Mavaza pamwe naAmai Barbara Tanyanyiwa